Momba anay - Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
Manana ny famokarana sy ny toerana famokarana feno izahay hihaonana amin'ny fahafahan'ny famokarana sy ny ekipan'ny fanadihadiana ataontsika momba ny fanaraha-maso henjana kalitao. Ny ekipanay mivarotra dia 24 ora hamaly ny fanontanianao sy hamaha ny olanao. Ho an'ny fandefasana dia manana fifanarahana amin'ny DHL, FEDEX, UPS, EMS, SF, TNT ho an'ny saram-pandefasana sy fiantohana fitaterana tsara kokoa izahay.
Ny kalitao no fotony, ny serivisy no motera. Izahay dia mifantoka amin'ny fanomezana ny mpanjifanay vokatra avo lenta miaraka amin'ny serivisy tsara indrindra. Ny vokatra rehetra voadidy avy aminay dia miverina miverina na miverina ao anatin'ny 7 andro fiasana raha misy ny olana ara-kalitao sy ny fahasimban'ny fitaterana. hamaha ny olanao ao anatin'ny 24 ora.
Hatreto dia nanompo ny mpanjifa avy amin'ny firenena 50 eran'izao tontolo izao izahay, ary ny 80% amin'izy ireo dia nanome fanekena sy fankasitrahana avo lenta ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisinay, ary nilaza fa hitazona hatrany ny fiaraha-miasa matanjaka miaraka aminay. Anisan'izany ny mpanjifanay, ny mpividy orinasa, mpaninjara, fivarotana an-tserasera ary fivarotana an-tserasera sns.
Manolo-tena amin'ny fanompoana ny mpanjifanay sy manome vokatra kalitao izahay, manantena ny handroso sy hiara-hivoatra amin'ireo mpanjifantsika. Vonona ihany koa izahay hitazona ny fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ny mpanjifanay. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisinay dia azonay atao ny mahatsiaro ho mora kokoa ny mpanjifanay ary mahazo toky kokoa izy hiara-hiasa aminay, ka hahatratrarana trangan-javatra mandresy. Ho an'ny olan'ny mpanjifa dia hanome fakan-kevitra sy vahaolana haingana araka izay azo atao izahay, mba tsy hanahy intsony ny mpanjifa.
Fanitarana volomaso, kapoka mink, lipgloss, Mpivarotra volomaso, Volomaso maso, eyeliner,